Musiyano Pakati peSEO Uye SEM, Maitiro maviri Ekutora Traffic Kune Yako Webhusaiti | Martech Zone
Chipiri, August 28, 2018 Kenneth Evans
Iwe unoziva mutsauko uripakati peSEO (Tsvaga Injini Kugonesa) uye SEM (Yekutsvaga Injini Kushambadzira)? Iwo ndiwo mativi maviri emari imwechete. Maitiro ese ari maviri anoshandiswa kutora traffic kune webhusaiti. Asi imwe yacho iri padhuze, kwenguva pfupi. Uye imwe yacho inowedzera mari kwenguva refu.
Wakatofungidzira here kuti ndechipi chiri chakanakira iwe? Zvakanaka, kana iwe usati uchiziva, pano tinokutsanangurira iwe. SEO inobata nemhedzisiro mhedzisiro; avo vanogara munzvimbo dzepamusoro dzekutsvaga kweGoogle. Uye iyo SEM ndiyo mhedzisiro kubva pakutanga iyo inorongwa semashambadziro.
Kazhinji, kushambadza kunoitwa kana iko kutsvaga kuchiratidza kutenga kwekungoda, kana kutsvaga ruzivo nezve chigadzirwa. Uye ivo zvakare vanosiyaniswa kubva pamhedzisiro yehupenyu nekuti ivo vanozivikanwa nekadiki kadhi kanoti: "Ad" kana "Inotsigirwa." Uyu ndiwo mutsauko wekutanga pakati peSEO neSEM ndiyo mhedzisiro inoonekwa mukutsvaga.
SEO: Yakareba-Tema Isu
Iyo SEO yekumisikidza iwo ese iwo matekiniki ayo anoshandiswa kumisikidza iyo peji rewebhu organic organic Google yekutsvaga. Regedza zvese izvo zvipikirwa zvinokuudza kuti SEO yakapusa uye zvinhu zvakadaro. Naizvozvo, mumwe musiyano mukuru pakati peSEO neSEM inguva yayo yekuwana mhedzisiro.
SEO inzira yenguva refu. Kuisa mhedzisiro papeji rekutanga reGoogle kunoenderana nezvinhu zvakawanda (mazana ezvingaite zvinhu).
Chinokosha pakutanga kushandisa nzira inonzi "muswe murefu." Shandisa mamwe mazwi akakudzwa, nekutsvaga kushoma asi kukwikwidza kushoma.
SEM: YeIye Pfupi Nguva Uye Kugadziriswa
Iyo SEM inoshandiswa kunyanya nekuda kwezvikonzero zviviri:
Kubata kushanya kune webhusaiti kubva pakutanga kweprojekti, patinenge tisati taonekwa munzvimbo dzehupenyu.
Kushandisa mikana yese, nekuti kana tikasaishandisa, makwikwi acho achazviita.
Mhedzisiro ichataridzwa neGoogle ye "shangu yemitambo" ichave yakasiyana ne "Nike yechipiri-ruoko shangu muLA" Vachave vashoma vanotsvaga iyo yekupedzisira, asi chinangwa chavo chakanyanya kujekesa.
Ichi chikonzero nei hunyanzvi hwekutsikisa kushambadzira muinjini dzekutsvaga, kunyanya kushambadza kweAdwords, kuchishandiswa zvese munguva pfupi kutanga kugamuchira vashandisi vanoshanyira webhu, uye -refu-refu kuti varambe vachichengeta chikamu chemusika muchikamu chino cheshambadziro.
Kune tsvagurudzo mune izvo zvakanyanya kuomarara kuoneka pane peji rekutanga remhedzisiro. Fungidzira kuti unotengesa shangu dzemitambo. Kuonekwa pane peji rekutanga rekutsvaga "tenga sneakers" ichave iri chaiyo marathon munguva refu. Ndokunge iwe uchizombosvika ikoko.
Iwe hauchakwikwidza zvekare uye hapana pasi pekupokana nehofori chaidzo senge Amazon Hapana, fungidzira kuti zvingave zvakaita sei kurwisa hofori idzi. Chokwadi, kutambisa nguva nemari.
Ndosaka ma ads kana akajekeswa, tipei mukana wekukwikwidzana neaya mahofori uye muve nemukana wekuonekwa mukusecha izvo zvingangodaro zvisingaite.
Misiyano Pakati peSEO neSEM
Ngatione misiyano yakanyanya kukosha pakati peimwe nzira neimwe.
Mazuva ekupedzisira - Zvinonzi iyo SEM ipfupi, uye SEO inguva refu. Kunyangwe, sezvawatoona, kune zvikamu izvo SEM zvinomanikidza kana iwe usiri kuda kurasikirwa chero mukana wekukwezva vatengi. Kubva panguva yatakarongedza mishandirapamwe yedu uye "isu tinopa bhatani," isu tichatanga kuoneka mukutsvaga kwemazana kana zviuru zvevashandisi (hazvo, iyo mari yatove zvinoenderana nebhajeti rako). Nekudaro, kuti uonekwe mumhedzisiro, zvinoda basa kwemwedzi yakawanda, kana kunyangwe makore, kuwana zvigaro zvishoma nezvishoma. Muchokwadi, kana webhusaiti iri nyowani, zvinonzi pane nguva iyo Google ichiri isingatore iwe zvakanyanya, izvo zvinowanzoita mwedzi mitanhatu. Uye zvisinei nekuti wakaita zvakadii rakapfuura basa, zvinoda kuti iwe uoneke mumapeji ekutanga einjini yekutsvaga kwemwedzi mishoma. Ndiyo inozivikanwa se "Sandbox" yeGoogle.
Mutengo - Iko mutengo mumwe mutsauko pakati peSEO neSEM. Iyo SEM inobhadharwa. Isu tinosarudza bhajeti yekudyara, uye isu tinobhadhariswa kubaya kose kunoitwa mukushambadzira kwedu. Ndosaka mishandirapamwe iyi ichinziwo PPC (bhadhara pakudzvanya). SEO ndeye mahara; haufanirwe kubhadhara chero munhu kuti aonekwe mumhedzisiro. Zvisinei, mutengo munguva uye maawa anoshandiswa anowanzove akakwirira kudarika munyaya yeSEM. Nzvimbo dze organic muinjini dzekutsvaga hadzifanirwe kunge dzichishandiswa. Kune mazana ematanho uye ma parameter ekutora kuti peji rionekwe pamberi kana mushure mevamwe Mimwe mitemo yemutambo iwe yaunofanirwa kuziva, uye kuti iwe unofanirwa kuve wakangwarira kuti usaedze kuchinja kuti usarwadziswe zvirango. Yekutanga ndiwo matekinoroji ekunyengedza maalgorithms (dzimwe nguva kunyangwe asina hunhu), uye yechipiri ndeyekushandira kusimuka, asi mukati memitemo yemutambo.
Nzvimbo muinjini yekutsvaga - MuSEM, pamusoro pekugara munzvimbo dzekutanga dzemhedzisiro, iwe unogona zvakare kuratidza kushambadza panoperera peji. mhedzisiro.
Mazwi - Maitiro ese ari maviri akavakirwa pakukwirisa kwemazwi akakosha asi ane musiyano wakakura mukutarisa kana tichiita zano reimwe kana imwe. Kunyangwe paine zvishandiso zvakasiyana zveSEO neSEM, Google's keyword planner inowanzo shandiswa mune zvese zviri zviviri kutanga kuronga zano. Patinotsvaga mazwi akakosha, chishandiso chinodzosera mazwi ese ane chekuita nechinyorwa chakasarudzwa, pamwe nekuwanda kwekutsvaga kwemwedzi wega wega, uye kuoma kwezita rega rega kana padanho rekugona.
Uye apa ndipo panosara musiyano mukuru pakati peSEO neSEM:
Tichiri muSEM, isu tinorasa iwo mazwi akakosha ane chiverengero chidiki chekutsvaga, SEO inogona kuve inonakidza kwazvo nekuti makwikwi akaderera uye anomhanyisa maitiro ekumisa nenzira yakasikwa. Zvakare, muSEM, isu tinotarisawo mutengo nekudzvanya kwezwi rimwe nerimwe (zvinoratidza, asi zvinotipa pfungwa yemakwikwi aripo pakati pevashambadzi), uye muSEO tinotarisa mamwe ma parameter senge simba reiyo peji .
Tags: organic searchyakabhadharwa kutsvagasearch engine marketingSearch Engine OptimizationTsvaga KutengesaShemusem vs seoseoseo vs sem
Chidiki chidiki cheKutsvagisa Chinogona Kushamisa Impact Yemagariro Kugovana uye Dhizaina Kutengesa